हामी पनि के कम ! – नासाको रोबोट मंगलग्रह पुग्यो, ड्राइभर बिनाको रेल आफै जनकपुर पुग्यो « paniphoto
« केही हास्यव्यङ्ग्य भिडियोहरु ढोगाईको सर्त »	हामी पनि के कम ! – नासाको रोबोट मंगलग्रह पुग्यो, ड्राइभर बिनाको रेल आफै जनकपुर पुग्यो
By -paniphoto- on Monday August 06, 2012	मंगल लगायतका ग्रहहरुलाई हामीले आकाशतिर फर्किएर धेरै पटक ढोगेका छौ । ति अशान्त भए भनेर यही धर्तीमा बसेर होम गर्दै तिनलाई शान्त बनाएका पनि हौं । यसरी हामीले देउता मानेर ढोग्ने चन्द्रमामा त पहिले नै मानिसले टेकिसकेको हो । आजै बिहान ११ बजेतिर नासाको रोबोट यान आठ महिनाको यात्रा गर्दै मंगलग्रह पनि पुग्यो । मंगलग्रहका अनेक रहस्यहरु पत्ता लगाउँने आशा गरिएको यो अभियानले पृथ्वीबाट कम्तिमा ५४६००००० किलोमिटर र बढीमा ४०१०००००० किलोमिटर टाढा रहेको ग्रहमा पुर्र्याएको छ । विज्ञानको यो ठुलो उपलब्धीमा सारा संसार रमाइरहेको छ । यही बेला हाम्रो एउटा रेलले पनि नयाँ किर्तिमान राख्यो । भारतको जयनगरबाट जनकपुर आउने तयारीमा रहेको जेड ई एन ५ (५३५) नम्बरको डिजल इन्जन चालकबिना नै २९ किलोमिटर गुडेर आजै अपराह्न जनकपुर आइपुग्यो । कान्तिपुरका अनुसार जनकपुर स्टेसन मैनेजर मणिराज खतिवडाले त यो घटनालाई दैवि शक्ति भनिसकेछन् । अचम्म पनि कस्तो ? पृथ्वीको एउटा कुनाबाट आठ महिना अघि छोडेको यान मंगलग्रह पुग्छ अर्को कुनामा मान्छेले बनाएको रेल दैवि शक्ति पाएर आफै कुदेको मानिन्छ ।
मंगलग्रह पुग्दा सम्म रोबोट यानले कतिवटा र कस्ता कस्ता आकाशिय पिण्डहरु पार गर्र्यो, ठ्याक्कै थाहा भएन । तर भारतको जयनगरबाट नेपालको जनकपुरसम्म आइपुग्दा भने सो रेलले बाटोमा पर्ने दुई दर्जनभन्दा बढी पुल, सातवटा रेल्वे स्टेसन तथा आधा दर्जनभन्दा बढी गाउँ पार बिना दुर्घटना पार गर्न सक्यो । सँधै प्रतिघण्टा १० किलोमिटरको गतिमा पनि नकुद्ने रेल आज भने ५० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा कुदेको थियो रे ।
प्राप्त जानकारी अनुसार- अपराह्न साढे तीन बजे जयनगरबाट जनकपुर आउने रेल सेवाको तयारीमा रहेका चालक रफिक कवारीले इन्जनलाई सफा सुग्घर गर्दै गरेको बेला इन्जन गुड्न थालेको थियो । एक रेल कर्मीका अनुसार- इन्जन स्टार्ट गरी कवारी पानी खान तल झरेका बेला इन्जन एक्कासि तीव्र गतिमा हुइँकिएको थियो । (स्रोत)
« केही हास्यव्यङ्ग्य भिडियोहरु ढोगाईको सर्त »	LeaveaReply Cancel reply	You can use these HTML tags
यही Category बाटलाज पचेपछि ….विधेयकमा आममाफी दिइने भनेर लेखेको तपाई आफुले नै पढेको हो ?माओवादी-मधेसीले घ्याम्पे हान्दै गरेको फोटो सार्वजनिकसंविधानसभा निर्वाचन २०७० नतिजा लाइभ अपडेटलाज पचेको, लबस्तरो !!विल ओरेलीलाई खुला पत्र – सुदर्शन सुवेदी ‘त्यो नेपाली मान्छे’ मात्र होइनन्अनि छापियो मुलधारका मिडियामा बेलबारी घटनाको खबर !पास हुनेलाई बधाई, फेल हुनेले हिम्मत नहारौँबिचरा, नेपाली क्रिकेट टोली ! के पारा हो क्यानको ?९/११ को आक्रमणपछि पहिलो पटक अमेरिकामा बम आक्रमण, कम्तिमा २ को मृत्युOnline Users9 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार